Dị ka ndị na-ahụ maka Sony, yana Joy-Con nke Nintendo Switch ị nwere ike igwu na Mac | Esi m mac
Dị ka ndị na-ahụ maka Sony, yana Joy-Con nke Nintendo Switch ị nwere ike igwu na Mac
Ndị njikwa njikwa na Mac bụ ihe anaghị alaghachikwute anyị, mana ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ bidoro ịzụrụ otu Nintendo consoles, Nintendo Switch ọhụrụ, ị maara na Joy -Cons, nke bụ otu esi akpọ njikwa, dakọtara na Mac gị. Ọzọkwa, e meela ule a na kọmputa ọgbara ọhụrụ, yabụ anyị ji n'aka na ọ ga-adaba na ụdị nke ụdị Mac ndị ọzọ. Inwe ike igwu egwu na Mac gị na njikwa ndị a ga-ekwe omume ihe ndị ọrụ nwere ihu ọma nke nwere ha abụọ ga-enwe ekele.
Nke a bụ tweet si onye ọrụ Sam Williams, onye mere ule ahụ na a 12-anụ ọhịa MacBook:
Chaị, bonus Nintendo Gbanye atụmatụ m atụghị anya: Joy Cons mfe okpukpu abụọ dị ka OSX Bluetooth controllers pic.twitter.com/3K99S1AAuF
- Sam Williams (@stimply) 5 March nke 2017
Yabụ nke a pụtara na enwere nnwale, ee, naanị ihe Na mbu, naanị otu njikwa nke Nintendo Switch ọhụrụ ka ọ na-arụ ọrụ n'otu oge, ihe nkịtị na aka nke ọzọ. O kwere omume na enwere ike ịhazi ya site n'ụdị ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ nke yiri ya ka ha abụọ na-arụ ọrụ n'otu oge, mana ọ bụghị ihe yiri ka ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na bọtịnụ ahụ dị nha anya na Joy abụọ -Con. Inwe nhọrọ a nke njikọ site na Bluetooth nke njikwa ga-enye ọtụtụ ndị ọrụ ohere igwu egwuregwu ha na njikwa a, ihe dị mma maka ndị nwere Mac na igwe ọhụrụ Nintendo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Dị ka ndị na-ahụ maka Sony, yana Joy-Con nke Nintendo Switch ị nwere ike igwu na Mac
Etu esi kpopu draịvụ ike ma ọ bụ USB n'ụzọ ziri ezi na Mac anyị
Mac2imgur na akpaghị aka na-ebugote ihuenyo niile na akaụntụ Imgur anyị